HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH KHAMIIS 10-KA OCT 2019-KA
Thursday October 10, 2019 - 09:59:29 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo '' Federaalku madax-bannaani u gaar ah ma siinayo dowlad gobolleedyada Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khu bad ka jeedinayay Shalay fur itaanka Ka lfadhigga Lixaad ee Barlamaanka
Madaxweyne Farmaajo '' Federaalku madax-bannaani u gaar ah ma siinayo dowlad gobolleedyada Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khu bad ka jeedinayay Shalay fur itaanka Ka lfadhigga Lixaad ee Barlamaanka So omaal iya ayaa soo hadal qaaday Arrim aha Fede raalka, isaga oo sheegay in Federaalku madax-bannaani gaar ah siineynin Dowlad gobolleedyada. Dhinaca kale madaxweynaha ayaa sheegay in haddii ay jiraan kuwo raba inay dalka ku hoggaamiyaan si qasab ah, uu dalka ka soo gudbay xilligii jahwareerka ah. Madaxweynaha ayaa yiri"Haddii ay jira an kuwa raba inay dalka ku hoggaamiya an si qasab ah, dalkeenu waa ka soo gud bay xilligii jahwareerka iyo in dadka lagu Owr kacsado, marnaba ma ogolaan doono in dalka dib u noqdo, wax Qaranimada ka yar ma aqbaleyno"ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri in nida amka Federaalka ay dowladdu ku dhisan tahay wax ka badalkiisana ay ku xiran ta hay afti dadweyne, inta ka horeysanaya ay san jirin cid wax ka badali karta. "Federaalka waa nidaam umadda Soo maa liyeed ay dooratay waa hab maamul ka do wladeena, umadda soomaaliyeed il laa iy ada ka go'aansato inay wax ka be desho dowlad ama koox gaar wax ka be deli karta aysan jirin, waxaa nasiib daro in dad gaar ah si qaldan u fahmeen nidaam ka federaal ka wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha DFS iyo dowladaha xubnaha ka ah, dow lad goboleedyada ma siineyso madax ban aani gaar ah, waxaa idin xusu usinayaa ila alinta Qaranimada Madax banaanidiisa ay saaran tahay dowladda Federaalka"ayuu yiri Madaxweyne Farm aajo. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya xili uu jiro khilaaf xooggan oo u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad gobolleedyada dalka, sida Punt land iyo Jubbaland, waxaa sidoo kale jira culeys dowaldda Somaaliya ka soo food saaraya Xisbiyada iyo Siyaasiyiinta Muca aradka oo maalmihii ugu danbeeyay eede ymo is daba joog ah u jeedinayay DFS.
Madaxweynaha Galmudug oo soo dhaweeyay guddiga ay ku dhawaaqday Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa taageeray islamarkaana soo dha weeyay guddi ga farsamo ee maa mul u sameyn ta Galmudug oo ay ku dhawaaqday Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Fede raalka.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Duc aale Geelle Xaaf ayaa qoraal uu soo saa ray kusoo dhaweeyay Guddiga fars amada iyo maamul u sameynta ee maga cawday dowlada federaalka, waxa uuna cadeeyay in raali ka yahay guddigan.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Xaaf in dhismaha guddigan kala qeyb qaateen Wasaarada Arimaha gudaha iyo federaal ka, waxaa uuna balan qaaday in guddigan kala shaqeyn doonaan dhameystirka dhis maha Galmudug.
Guddigan ayaa lagu wadaa in ay gud aha gallaan farsamadii dhismaha Galmud ug cusub loo dhan yahay, inkastoo wali ay jiraan caqabado ka taaggan dhismaha ma amulkan oo ay beelaha qaar ka biyo dii dan yihiin hab ay dowladdu ku maamul eyso qorshaha dhismaha maamulka.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Te knolojiyadda Soomaaliya,Eng; Cabdi Cas huur Xasan, ayaa sheegay in ay heer ga ba-gabo ah maray aan dedaal lada dib loo gu bill aab ayo dir ista Boosta da Dalka.
Wasiir Canshu ur, oo ka hadlayay mun aasabada lagu xusayay Maalinta Bo osatada Caalamka iyo 60 guuradii kasoo wareegatay markii ay Soomaaliya xubin ka noqotay Ururka Boostada Adduunka ayaa ku nuux-nuuxsaday inay dedaallo dheer u soo mareen sidii ay Boostada Soomaaliya ula jaanqadi lahayd Caalamka intiisa kale.
Wasiirka ayaa qiray inkastoo ay sii kor dheyso adeegsiga Teknolojiyada Adduun ka oo dhan, haddana in weli aan laga maa rmin kaalinta Boostada, maadaama ay yihiin adeegyo dhamaystiraya hawlaha ay Boostadu u hayso Dadweynaha. Maali nta Boostada Adduunka waxaa looga dha waaqay shirweynihii Midowga Boostada Adduunka ee lagu qabtay Maga alada Tok yo ee Dalka Japan Sanadkii 1969-kii, iya doo ujeedkuna uu yahay sidii loo kordhin lahaa wacyi-gelinta Dadweyna ha ee kaalinta ay Boostadu ku leeyaday horumar ka dhaqan-dhaqaale ee Dal kasta.
Soomaaliya ayaa ku biirtay Ururka Midowga Boostada Adduunka 1-dii Abriil 1959-kii, waxaana xilligaasi adeegga Bo osto ee Dalka ka shaqeyn jiray in ku dhow 3 kun oo Qof, iyadoo ay meesha ka bax day wixii ka dambeeyay Dowladdii Millit ariga ee bur-burtay 1991-kii.
DENI oo diiday dalab ay hordhigtay DF Soomaaliya Maantana ku wajan ksimaayo
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo bxaya kulan xasaasi oo u dhexeeyey Madaxweynaha Puntland, Siciid C/hi (De ni) iyo wasiiro uu hoggaaminayey wasiirka arri maha dibadda XFS, Md. Axmed Ciise Cawad oo Habeen Hore ka dha cay M/Boosaaso ee xar unta gobolka Bari.
Shirka oo natiijo la’aan ku soo dha maaday ayaa wax aa diirada lagu saar ay khilaafka Puntland kala dhexeeya do wladda iyo arrimo ku aadan caleema saa rka Axm ed Madoobe
Madaxweyne Deni ayaa ogolaaday in wadahadal uu la galo DFS, si loo dha mee yo khilaafka labada dhinac.
Warar kale oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in wasiirada ka soc day xukuumadda Xasan Cali Khayre ay Deni ka dalbadeen inuusan ka qeyb galin xafladda Caleema Saarka ee Madaxwey ne Axmed Madoobe, taasina uu ka biyo diiday.
Wasiirada la kulmay Madaxweynaha Puntland, oo kala ah wasiirka arrimaha di badda, Axmed Ciise Cawad, wasiirka Qor sheynta, Jamaal Maxamed Xasan, wasiir ka kalluumeysiga, Cabdullaahi Bidhaan, wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta, Cabdi Canshuur Xasan ayaa ku guuldareystay qorshaha ay u socdeen, waxaana shalay ay dib ugu soo laabteen M/Muqdisho. Arri ntan ayaa sare u sii qaadeysa xiisada haa tan u dhexeysa DFS & Puntland, mana muuqato wax isku soo Dhawaansho oo 2da dhinac ah. Iyadoo maanta uu ku waj an yahay Md. Dani M/Kismaayo si uu ugu qeyb galo Caleema saarka Md.Axmed Ma doobe oo aan la shaacin xilliga ay dhace yso hase yeeshee dhowr jeer dib u dhac day lana sugaayo inta Kismaayo ay martida ka imaaneyso kaliya
SABABTA GABADH REER UGANDA AH AY KELLI DEEDA UGU DEEQDAY NIN SOOMAALI AH
Waa dhacdo hadal hayn badan dhalisay kana farxisay Cab diraxmaan Maxamed Ibraahim oo loo garan ogyahay (Cabdira xmaan Waryaa) isla markaana mudo dhowr sano ah daris la ahaa xanuun ka haleelay Kelliyaha kaas oo markii ugu hore eysay uu isku arkay sanadkii 2015-kii xilli uu soo gutay waaji baadka Xajka. Wuxuu ku nool yahay dalka Norway.
Gabadhaan oo lagu magacaabo Marian Nabunya, asal ah aana ka soo jeeda dalka Ugandha ayaa ka mid aheyd maca amiisha dukaan uu uu Cabdiraxmaan ku lahaa magaalada Os lo waxaana ay is yaqiineen mudo badan taasi oo horseed u no qtay in ay si qoto dheer u wareeysato xaaladda caafimaad ee Cabdiraxmaan.
Cabdiraxmaan oo xaaladiisa caafimaad ay ku qaaday inuu safro dalalka Jarmalka iyo Mareykanka ayaa mar walba la sii nayay daawo kaalmaati ah oo mudo kooban uun uu isticma alayay.
"Maalin maalmaha ka mid ah oo aan wada qadeyneynay waxaan isku soo qaadnay xaaladeyda caafimaad oo sii liidane ysay, arageygeyna uu sii daciifayay marka iyadaa i wayadiisay oo igu tiri maalmahaan muuqalkaagu ma wanaagsanee sidee wax u jiraan ", ayuu yiri Cabdiraxmaan oo ka sheekeynaya si da ay ku timid tabarucaadda Mariam.
Intaas kadib Markii uu Cabdiraxmaan u sheegay in u u baa han yahay in laga badela kellidiisa, ayay u sheegtay jawaab la yaab leh oo uusan filaneynin.
Marian Nabunya ayaa qaadatay go'aan waxayna aaday cus bitaalka si ay ugu sheegto inay dooneyso in ay kellideeda ku caawiso dhibane Cabdiraxmaan.
Baaritaan ka dib waxay u saxiixday inay ugu deeqdo kelllid eeda si mutadawcnimo ah.
Cabdiraxmaan ayaa hadda sugaya in kellidaasi loo geliyo, waxaana uu sheegay in shekadan uu go'aansaday inuu la wa daago bulshada si buu yiri uu dadka ugu baraarujiyo in caaw inta qof buko oo xubin muhiim ah u baahan loo caawiya iya doo ana la eegeynin xiriirka uu qofkaasi kula wadaago.
"Dad badan oo Soomaali ah ayaa cabsi ka qaba inay sidan oo kale u caawiyaan dadka asxaabtooda ah ee xannusan. " Wuxuu ugu baaqayaa dadka inay gabadhan tusaale ka dhigt aan oo ay xitaa xubnahooda ku deeqaan marka ay dhintaan.
Mr.Cabdiraxmaan waxaa uu sheegay in uu faraxsanyahay uuna leeyahay nasiib u horseeday in uu helo saaxiib qaali ah oo ah gabadha ugu deeqayso kellideeda.
Waxaa uu hadda rajo fiican ka qabaa xaaladiisa caafimaad waxaana sheekadiisa ay dhalisay hadal hayn badan oo la xiri irta sida gabadhan ajnebiga ah ninkaan Soomaaliga ah ugu caawisay xubin muhiim ah oo jirkeeda ka mid ah .
Dadka qaar ayaa u riyaaqay sida binu aadinimada leh ay ga badhaan u caawisay Cabadiraxmaan oo mudo la il darnaa xau unka kalyaha waxaana uu sheegay in aysan wax dhaqaale ah waydiisan oo iyado qaadatay go'aan geesinimo leh
Xafiiska dambi baarista mareykanka ee loo soo gaabiyo FBI ayaa sheegay ka dib baaris muddo dheer socotay in Sa mwel Lital uu qirtay dilka 93 qof , taas oo ka dhigan in uu yah ay dhiig yacabkii ugu weeynaa taariikhda dalka Mareykanka.
Ninkan oo 70 sanno jir ah ayaa sanadkii 2012kii lagu xuk umay Xabsi daa’in inta noloshiisa ka dhimman uu ku qaadan doono Xabsi ku yaala dalka Mareykanka , isaga oo lagu soo eed eeyay dilka 3ddex haween ah Mas’uuliyiinta FBI ayaa sheegay in ninkaan uu beegsan jiray haweenka Masaakiinta ah iyo kuwa Mukhaaddaraadka isticmaala ee Madowga ah.
Ninkan oo feer yahan hore ahaa ayaa la sheegay in feer xooggan uu ku dhufan jiray qofka uu doonayo in uu ka takha luso ka dibna ceejo ayuu ugu dari jiray illaa ay nafta ka baxdo qofka.
Saraakiisha caafimaadka FBI ayaa sheegay in marnaba aan lagu baraarugin dilalka haweenkaasi , waxaana loo hees tay in Mukhaadaraad ay u dhinteen iyada oo illaa imminka la la’yahay meeydka qaar ka mid ah ah haweenkaasi la rummee ysan yahay in ninkaan uu u dhammeeyay ama dilay.
Ninkaan ayaa aaminsanaa in marnaba aan la ogaan doon in dambiyada uu geeysanayo , isaga oo iska dhaadhiciyay in aysan jiri Karin cid ogaata .
Police waxa ay heleen macluumaad caddeynaya in nink aan uu ka dambeeyay dhammaan eedeeymaha loo heeysto ee dilka 93 qof ah.
Dadka uu dilay waxaa ka mid ah gabar 19 jir ahayd oo uu ku dhex dilay beer qasabka lagu beero halkaasna uu ku qari yay meydkeeda
Ninkaan ayaa gacanta lagu soo dhigat sanadkii 2012kii , kadib baaris muddo dheer qaadatay oo la xiriirtay eedeeymo ay ka mid yihiin Kufsi, Boob iyo dil oo uu ka geeystay Gobollo badan oo dalka Mareykanka ah.
Itoobiya oo shaacisay xilliga la tijaabinayo dayax gacmeedkeedii ugu horreeyay
Madaxweynaha dalka Itoobiya marwo Sahle-Work Zewde ay aa si rasmi ah ugu dhawaaqday in dalkeeda uu dabayaaqada sanadkan tijaabinayo dayax gacm eedkiisii ugu horreeyay.
Madaxweynaha ayaa sheeg tay in bisha Diseembar ee ina soo aaddan loo qorshheyay in hawa da loo diro dayax gacmeedka la tij aabinayo.
Dayax gacmeedka ayaa laga diri doonaa xarun ku taalla dalka Shiinaha iyada oo ay xusid mu dan tahay in howlaha horumarinta dayax gacmeedkan ay gacan ta ku hayso shirkad Shiineys ah.
Madaxweyne Zewde ayaa tilShalayy in haddii ay guulaysato tijaabada dayax gacmeedkan uu looga faa’iideysan doono arri maha horumarinta dalagga beeraha dalkeeda.
Dayax gacmeedkan ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa dabagalka iyo uruurinta xogaha beeraha, biyaha, macdanta iyo horumarinta magaalooyinka.
Itoobiya ayaa la rajaynayaa in ay ka mid noqoto dalalka Afrika ee yeesha dayax gacmeed iyada oo ay horay dayx gacmeed ha wada sare ugu direen dalalka Masar, koofur Afrika, Nayjeeriya, Ghana , Kenya iyo kuwo kale.
Madaxweynaha Somaliland Oo La Kulm ay Safiirka Midowga Yurub Ee Somalia
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa Shalay oo ay taariikhdu ahayd 09-10-2019 xafiiskiisa ku qaa bilay safiirka midawga yurub u qaabilsan Soomaaliya, Amb. Nic olás Berlanga Martinez iyo wefti uu hoggaaminayo.
Kulankaana waxa lagaga wada ha dlay xoojinta xiriirka wada shaqayne ed ee ka dhexeeya Somaliland iyo midawga yurub sidii loo dardar-gelin lahaa.
Sidoo kale, waxa lagu lafo-guray mashaariicda horumarin eed ee midawga yurub iyo Somaliland iska kaashadaan hirgeli ntooda iyo diyaar garawga doorashooyinka goleyaasha wakiill ada iyo deegaanka oo safiirku sheegay inay dhinacooda diyaar u yihiin wixii kaalmo ah ee ay kaga qayb-qaadanayaan qabsoomi da doorashooyinka Somaliland.
Wasiir Cawad oo soo laabtay kana Had lay Kulankii Ay La Qaateen Madaxweyn aha Puntland
M/Muqdisho ayaa Shalay waxaa dib ugu soo laabtay wafdi Wasiirro oo ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya oo shalay gaaray M/Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Wafdigan ayaa waxaa hogaaminayay Wasiirka Arrimaha Diba dda Axmed Ciise Cawad,waxaana ka qeyb ahaa Wasiirka Qorsh eynta Jamaal Maxamed Xasan, Wasiirka Wasiirka Kalluumeysi ga C/llaahi bidhaan, Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Eng Ca bdi Canshuur Xasan iyo xubno kale, kuwaasi oo dhammaantood kasoo je eda Puntland.
Sidoo kale Wasiiradan ayaa Boosaas o kulan kula yeeshay Madaxweynaha Puntl and Saciid Cabdullaahi Deni,iyagoo na ka wada hadlay arrimo kala duwan.
Wasiir Axmed Ciise Cawad ayaa sheeg ay inay ku guuleyst een in la soo celiyo xiri irkii ka dhaxeeyay Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedka Puntland.
Isaga oo sii hadlaayay Wasiirka Arrim aha Dibadda Soomaal iya ayuu tilmaamay in Madaxweynaha Puntland iyo dowladda ay ku kala aragtiyo duwan yihiin Arrimaha Jubbaland oo khilaaf xo ogan dowladda kala dhexeeyo.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa iska dii day dalab uga yimid DFS oo ahaa inuu ka baaqdo Xaflada Caleemo-saarka Madaxw eynaha Jubbaland Axmed Madoobe,isla markaana joojiyo taageerada uu siinayo maamulkaas.
Si kastaba Madaxweynaha Puntland Md.Deni ayaa Shalay la gu waday inuu safar ugu ambabaxo M/ Kismaayo, hayee shee waxaa lagu wadaa Deni inuu tago Kismaayo
WAX KA OGOW XANUUNKA MACAANKA
Xanuunka Macaanka ama Sokorowgu Waa xanuun ku dhaca aadanaha guud ahaan saameeyana caafimaad iyo isu dheelli tirnaanta jirka, xanuunka mar waa halis marna ma aha
Xanuunka macaanka waa halis marka la eego qodobadan
-Xanuunka sokorto Waa mid ka mid ah xanuunnada laysugu gudbiyo firka
-Xanuunka Sokortu waa xanuun qofka uu ku dhaco anu Ka Bogsanayn
– Xanuunka Sokortu waa Xanuun Yaraynaya difaaca qofka ee cudurrada kale
-Bukaanka qaba xanuunka Sokarta ofka way adagtahay in ay bogsadaan dhaawacyada soo gaara jirkiisa
-waa xanuun u baahan taxadar joogto ah oo uu sameeyo bukaanka qaba macaanka.Xanuunka sonkorta wali lama hayo jawaab saxa oo qeexaysa sababta keentay cudurkan hase ahaatee waxaa jira waxyaalo badan oo la xaqiijiyey inay keenaan ama ay fududayeen in uu qofku haleelo xanuunka sida isticmaalka macmacaanno fara badan, cuntiiyinka dufanku ku badanyahay, cuntooyinka aan isu dheelli tirneyn iyo jimicsi la’aanta.
Waxyaabahan aan kor ku xusnay qofka ay ku kulmaan waxa uu halis ugu jiraa xanuunka macaanka ama sonkorowga sidoo kale waxaa xanuunka macaanka keena iyadoo qofka dhaawac kasoo gaadho xubinta ganaca oo ah xubinta soo daysa dheecaanka loo yaqaanno insulin kaasoo joogteeya isudheelitirka sonkorta loobahan yahayee jidhka wixii dheeriyana joojiya
Xanuunkan macaanka waxa aloo qaybiyaa laba qaybood oo waawayn hase ahaatee waxaa jirta qayb sadexaad oo gaar u ah dumarka xiliga ay uurka leeyihiin waxaana la dhahaa ( gestational Diabetic )Laba qaybood oo kale ayaa lagu kala magacaabaa type 1 iyo type 2 ama nooca 1aad iyo nooca 2aad
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo maga cowday guddiga farsamada dhismaha Galmudug Magacyada Gudddiga oo la shaaciyey
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee XF/ Soomaaliya ayaa Habeen Hore ku dhawaaqday Guddiga Farsamada maamul dhisadda Gal mudug, kaas oo ka shaqeyn doona arri maha maamulkaasi oo dhowaan doorasho galaya.
Wareegto ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo dib u Heshiisiinta ayaa lagu magacaabay guddi ka kooban 13 xubnood oo kala matalaya beelaha Galmudug.
Wareegtadan ayaa waxaa wariyeyaa sha u akhriyay Ku simaha Wasiirka Arrima ha Gudaha Isaaq Maxamed Maxamuud, isagoo bulshada Galmudug ka codsaday inay la shaqeeyaan guddiga cusub ee loo magacaabay ka shaqeynta dhismaha Gal mudug. Guddigan cusub ee la magacaab ay ayaa iska dhex dooran doona Guddoo miye iyo ku xigeen iyaga oo intaas ka dib na bilaabi doono howsha farsamo ee lagu dhisayo Galmudug.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha XFS ayaa garwadeen ka ah doorashada ka dhi ci doonta Galmudug waxaana la filayaa in ay geedisocodka doorashadu uu dhowaan bilaaban doono.
Lifaaqa hoose ka akhriso magacyada guddiga farsamada dhismaha Galmudug.
Ciidamada Turkiga Oo Dhawaan How lgal Qorsheysan Ka Bilaabaya Dalka Syria
Saraakiisha militariga Turkiga ayaa sheegay in ciidamadooda ay diyaar u yihiin inay billaabaan howl-galka muddada la qorsheenayey ee ka dhanka ah ciid amada Kurdish-ka ee gudaha dalka Syria.
Ciidamadan, oo Ankara ay ku sheegtay inay yihiin argagixiso, ayaa Reer Galbe edka u arkaan saaxiibo muhiim u ah daga alka ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee Daacish.
"Ciidamadeena guuleystayaasha ah wa xay diyaar u yihiin Howlgalka Aaga Amn iga” waxaa sidaas barta twitter-ka soo dhi gay ciidamada Turkiga, oo ballan-qaaday dagaal ka dhan ah wax ay ugu yeereen argagi xisada Kurdish-ka iyo kuwa Daacish.
Dhinaca kale, agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweyne Erdogan Fahrettin Altun ayaa faallo uu ku qoray wargeyska Washington Post ku sheegay in ciidamada Turkiga oo ay wehliyaan Ciidamada Xore ynta Syria "ay dhowaan ka gudbi doonaan xuduudda Syria.”
Altun ayaa ugu baaqay bulshada caala mka "inay taageeraan dadaallada dib u dhi ska iyo xasileynta Turkiga,” waxaana uu sheegay in damaca Turkiga ee Syria uu yahay kaliya "in meesha laga saaro halis muddo fog ay wajahayeen muwaadiniinta Turkiga.”
Dhinaca kale, ciidamada Dimoqraadiga Syria (SDF) ee uu Mareykanka taageero ayaa ugu baaqay caalamka inay u dhaqa aqaan sidii looga fogaan lahaa musiibo bani’aadamnimo oo ka dhacda waqooyiga Syria.
Howlgal Lagu Dilay Xubno Ka Tirsan Al-Shabaab Oo Laga Fuliyay Jubbada Hoose
Wararka aan ka heleyno duleedka Magaa lada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Shabe ellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaa in halkaas Ciidanka ammaanka Jubbaland ay ka fuliyeen howlgal qorsheysan.
Ciidanka ammaanka Jubbaland ayaa hawlgallo ka sameeyay Galbeedka Gob olka Jubadda Hoose gaar ahaan aaga dee gaanka Beerxaani,iyadoona sheegay in halkaas lagu dilay dagaalyahano ka tirsa Al-shabaab.
Saraakiisha hogaamineysa howlgalka oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa sheegeen in howlgalka inta uu socday lagu dilay shan kamid ah dagaalamayaasha Al-shabaab,kuwaasi oo ku sugna aaga deegaanka Beerxaani.
Afhayeenka Wasaaradda amniga dowlad Goboleedka Jubbaland Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay Madaxii Maaliyadda ee deeganada Miyiga Al-Shabaab u qaabilsanaa oo magaciisa lagu soo gaabiyay Cali. Ciidamada Daraa wiishta Jubbaland iyo kuwa Xoogga dalka Soomaaliya ayaa how lgal ka dhan ah Al-shabaab ka wada deeg aano ka tirsan Go bolka Jubbada Hoose.
Mareykanka Oo War Kasoo Saaray Bannaanbaxyadii Ruxay Ciraaq
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa cambaareeyay falkii lagu dilay tobnaan ruux intii ay socdeen bannabaxyadi todobaadki hore ruxay dalka Ciraq.
Pompeo oo Talaadadi khadka telefoonka kula hadlay Ra’isulwasaaraha Ciraaq Adil Abdul Mahdi, ayaa dhaleeceeyay rabshadihi lagu laayay dadki bannaanbaxyada dhigayay, isaga oo ugu baaqay dowladda Ciraq in ay maxkamad soo taagto kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadahanah.
Mudaaharaadyadi ka dhacay Ciraq ayay shacabka ku dalbadeen in la dhameeyo musuq maasuqa dowladda ka jira iyo in wax laga qabto shaqo la’aanta ba’an ee dalkaasi ka jirta.Rabshadihi ka dhashay dibadbaxyada ayaa sababay dhimashad da in ka badan 100 ruux iyo
dhaawaca dad gaaraya lix kun oo qof.
OGEYSIISKA HALKAN AYAA LA SIIYA in calaamada kor ku xusan ay tahay astaanta ganacsiga:
Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi,a Turkish company of 4, Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde, No: 8, Sehitkamil - Gaziantep, Turkey
Nadiifinta iyo diyaarinta nadiifinta, saabuunta dharka aan ahayn isticmaalidda howlaha wax soosaarka iyo ujeedo caafimaad, biliijisada dharka, dharka jilicsan ee dharka lagu dhaqo, marooyinka wasakhda, saabuunta weelka lagu dhaqo; cadar; is qurxinta (marka laga reebo waxyaabaha la isku qurxiyo ee dawada laga helo); udgoon; deodorants for isticmaalka shaqsi iyo xayawaanka; saabuun (marka laga reebo saabuun dawo ah); u diyaar garowga daryeelka ilkaha, ilkaha ilkaha, wasakhda ilkuhu, u diyaarinta ilkaha ilkaha, maydhista afka, ujeedooyin caafimaad mooyee; u diyaar garowga baabi'inta; maro Emery; waraaqo caag ah; dhagax diirran; ood-dhaafyada; u diyaarinta polishing ee maqaar, vinyl, bir iyo alwaax, ubax iyo kareemo maqaar, vinyl, bir iyo alwaax, wax wax lagu karsado; tirtiraha ilmaha; tirtirka ilmaha ujeeddooyin qurxinta; canuga wuxuu tirtiraa unugyo leh nadiifinta diyaarinta; daawooyinka iyo u diyaar garowga daaweynta xoolaha ujeedooyin caafimaad; diyaarinta kiimikada ee ujeeddooyinka caafimaadka iyo caafimaadka xoolaha, dawooyinka kiimikada ee daaweynta iyo ujeeddooyinka caafimaadka xoolaha; kaabeyaasha cuntada ee loogu talagalay ujeeddooyinka dawooyinka iyo caafimaadka xoolaha; cuntada kaabista ah; kaabista nafaqada ah; u diyaar garowga caafimaad ee ujeedooyinka slimming; cuntada dhallaanka; geedo iyo cabitaanno geedo leh oo ku habboon ujeeddooyin caafimaad; u diyaarinta ilkaha iyo qodobbada: sheyga buuxinta ilkaha, sheyga iligga muujiya, waxyaabaha ilkaha lagu dhejiyo iyo waxyaabaha loogu talagalay hagaajinta ilkaha; u diyaarinta fayadhowrka caafimaadka; Xirmooyinka nadaafadda; tampons nadiif ah; balaastigyo; qalabka dharka lagu xidho; xafaayadaha ka sameysan xaashiyaha iyo xaashiyaha carruurta; u diyaar garowga baabi'inta carbiska; doogga dhirta, fungicides, u diyaarinta burburka jiirka; deodorants, aan ka ahayn aadanaha ama xoolaha; diyaarinta nadiifinta hawada; jeermis-dileyaasha; antiseptics; saabuunta dharka loo isticmaalo ujeeddooyinka caafimaad; u diyaarinta cuntada ee isticmaalka gaarka ah ee laga sameeyay caanaha, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo alaabada xoolaha; hilibka, kalluunka, digaagga iyo ciyaarta; Soosaarka hilibka; miro iyo khudaar la sii diyaariyey, la qalajiyey oo la kariyey; hilibka, kalluunka, miraha iyo jeliska khudradda, saxmadda; caano; waxyaabaha caanaha laga sameeyo, oo ay ka mid yihiin subagga, jiiska, kareem, caano, kefir, caano budada ah, dufanka laga soo saaray caanaha; saliidaha la cuni karo iyo dufanka; Hilibka qasacadaysan iyo kalluunka; saxamada diyaarka ah oo laga sameeyay hilibka, khudradda, khudradda iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo; caano laga sameeyay fitamiin; u diyaarinta cuntada ee isticmaalka gaarka ah ee ku saleysan dhir, waxyaabaha geedka, dalagyada, miraha, miraha khudradda, cagaarka iyo waxyaabaha dhumuc leh; qaxwada, shaaha, shaaha (cabitaanka), gaar ahaan geedaha ama shaaha miraha; kookaha, sonkorta, macmacaanka, bariiska, tapioca, sago, badalida kafee; bur iyo diyaarin laga sameeyay badarka; rooti, ​​buskud, buskud; malab, cuntada ku saleysan oat, bur galley ah; biyaha macdanta, biyaha iftiinka leh iyo cabbitaannada kale ee aan khamriga ahayn; sharoobada iyo waxyaabaha kale ee aan khamriga ahayn u diyaarinta cabitaanka; biyo fitamiin tamarta leh [cabbitaannada]
OGAYSIISKA SIDO KALE WAXA BIXINAYA in in talaabo sharci ah laga qaadi doono qofkasta ama shirkad isticmaasha sumadda ganacsiga ee la sheegay ama wixii ku dayasho mudan ama si kale ku xadgudbay xuquuqda shirkadda la sheegay